Otaku တွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ပြဿနာ (၇)မျိုး - For her Myanmar
Otaku ကို တိတိကျကျ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့က အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ Japan Anime တွေကို အသည်းစွဲ သဘောကျ နှစ်ခြို့်တတ်သူတွေ၊ အချိန်ပြည့် ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး Anime ကြည့် (သို့) Manga ဖတ်နေတတ်သူတွေ၊ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ Anime Character နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သူတွေနဲ့ Cosplay တွေကို သဘောကျတတ်သူတွေ လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီ့ထက်ပိုရှင်းအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Anime မှ Anime ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့… (တကယ်တော့ Otaku ဆိုတဲ့ အသုံးက Negative ဘက် နည်းနည်းရောက်ပါတယ်နော်… နောက်များမှ Otaku အကြောင်း အကျယ်တဝင့်ပြောကြတာပေါ့.. လောလောဆယ်တော့ အက်ဒ်မင်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေး အရင်သွားကြရအောင်..)
ဒီလို Otaku တွေဟာ ပုံမှန် Anime ကြည့်လေ့မရှိသူတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Otaku တွေအကြောင်း Otaku တွေပဲ သိလို့ပေါ့… ဒါဆို Otaku အချင်းချင်းသာ နားလည်နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
၁။ ဂျပန်စာ သင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
သူများတကာတွေက JLPT တွေ ဖြေမယ်၊ ဂျပန်မှာ ကျောင်းတက်မယ်၊ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ ရှိကြပေမဲ့ Otaku တွေ ဂျပန်စာ သင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ Sub (စာတန်းထိုး) ကို မစောင့်ဘဲ Anime တွေ ကြိုကြည့်ချင်လို့ပါ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ နောက်မှာမှ ဂျပန်သွားဖို့ဆိုတာ လိုက်လာတာပါ။ သွားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း မေး.. ၉၀% လောက်က Anime နဲ့ ဆက်စပ်နေတာချည်းပဲ 😀
၂။ ကြည့်လက်စ Anime ပြီးသွားတဲ့အခါ
ဘဝကြီး အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့သလိုလို့ ပြောလိုက်ရင် လွန်ရာများ ကျသွားမလား 😀 ဒါပေမဲ့ တကယ်ပါပဲ.. ကိုယ်ကြည့်လက်စ Anime တစ်ခု မပြီးခင်မှာ ဒီ Anime ကို ဇာတ်မသိမ်းသွားစေချင်သလို ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း Season အသစ်ကို မျှော်ရပါတယ်။ Season အသစ် မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ရှင်သန်ရခြင်း အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ဆုံးသွားသလိုပါပဲ… T.T ဘယ်သူနဲ့မှလည်း မပြောချင်၊ မဆိုချင်၊ စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းပြီး ရည်းစားနဲ့ ပြတ်လို့ အသည်းကွဲတာထက်တောင် ပိုဆိုးပါသေးတယ်။ (အက်ဒ်မင်ဆို Bleach နဲ့ ကမ္ဘာပျက်ပြီးပြီ 😀 )
၃။ Anime တွေကို နားကြပ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကြည့်မိတဲ့အခါ
ကြုံဖူးလား? ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရိုးရိုးသားသားလေး Anime တွေကို ဖွင့်ကြည့်တာ… ဘေးက သူငယ်ချင်းတွေက ၁၈ ယောက်အထက် စုကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်နေတယ်လို့ ထင်သွားတဲ့ အဖြစ်မျိုး -_- အက်ဒ်မင်တော့ ခဏခဏ ခံရပါတယ်ရှန် :/
၄။ ဇာတ်ကားပေါ်လိုက်ပြီး Mood ပြောင်းတာ
Kuroko No Basket ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘတ်စကက်ဘော ဆော့ချင်တာမျိုး၊ Haikyuu ကြည့်ရင် ဘော်လီဘော ဆော့ချင်တာမျိုး၊ Bleach ကြည့်ရင်း Hollow တွေနဲ့ တိုက်ချင်တာမျိုး၊ Free ကြည့်ရင် ရေကူးချင်တာမျိုး၊ Tokyo Ghoul ကြည့်ပြီး လူတွေကို မုန်းတာမျိုး၊ Sword Art Online ကြည့်ပြီး ဂိမ်းဆော့ချင်တာမျိုး.. ကိုယ်တို့ Otaku တွေသည် ကြည့်တဲ့ Anime ပေါ်လိုက်ပြီး Mood ပြောင်းတတ်သော ပါပဲ 😀
၅။ Anime တွေကို Dubbed နဲ့ ကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါ
အက်ဒ်မင့်အတွက် အဆိုးဆုံးသော ဖီလင်က ဒါပါ… ကိုယ်မတရားကြိုက်တဲ့ Anime တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန် အင်္ဂလိပ် အသံထွက်နေတာမျိုးဆို ဒေါသက တလိမ့်လိမ့် ထွက်လာရော.. :’D မခံစားနိုင်ပါဘူးရှန်… ဘယ်လိုပဲ 2D ပါလို့ပြောပြော လက်ကို မခံနိုင်တာပါနော်.. (ဒါတော့ တရုတ်ကားတွေ၊ ထိုင်းကားတွေကို မြန်မာ Dub နဲ့ မခံစားတတ်တဲ့သူတွေပါ နားလည်နိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့ :’D )
Related Article >>> ၅၂၈ မေတ္တာကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ Anime ရုပ်ရှင်ကား(၃)ကား
၆။ ဒီအရွယ်ထိ ကာတွန်းကားတွေ ကြည့်နေတုန်းလားလို့ အပြောခံလိုက်ရတဲ့အခါ
Anime ဆိုတာဟာ ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ လူငယ်နဲ့ လူကြီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ရင်း ကလေးတွေပါ ကြည့်လို့ရအောင် ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာတွန်းလို့လည်း ခြုံပြောလို့ မရတဲ့အကြောင်း (တကယ်တော့ ဂျပန်ကာတွန်းဆိုရင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်တော့ မှန်ရှာပါတယ်… မကြိုက်ပေမဲ့လို့လည်း လက်ခံပေးရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိတာကိုး :3 )၊ ကွာခြားချက်တွေကို သေချာ မြင်စေချင်ကြောင်း တနံတလျား ရှင်းပြလိုက်ရမှ.. 😀 ပြောရတာလည်း မောနေပါပြီရှင်… ဒီလောက်ရှင်းပြလည်း နောက်ဆုံးကျ.. အေးပါ.. အေးပါ.. နင်ပဲ နင့်ကာတွန်းတွေနဲ့ နေပါ ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ….
၇။ Otaku နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ
အမှတ်မထင် စကားစပ်မိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူလည်း Anime ကြည့်တယ်ဆိုပြီး သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေပါပဲရှင်… ပြီးရင်တော့ ဘယ် Anime က ဘယ်လို ဘယ်ညာ ဘယ်ချမ်းသာဆိုပြီး ရေပက်မဝင်အောင် စကားတွေ များကြတော့တာပါပဲ… သူ့ဆီက ရှိတာ ကိုယ့်ကို ပေး၊ ကိုယ့်ရှိတာ သူ့ကိုပေးပြီး အဲ့ဒီကနေပဲ အရင်းနှီးဆုံးတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။
ကဲ.. ဒီထဲက ဘယ်နှစ်ချက်နဲ့ ကြုံဖူးကြလဲ ယောင်းတို့? ယောင်းတို့ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေလည်း ပြောပြသွားကြဦးနော်…
Otaku ကို တိတိကကြ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုဖို့က အတျောခဲယဉျးပါတယျ။ အလှယျပွောရရငျတော့ Japan Anime တှကေို အသညျးစှဲ သဘောကြ နှဈခွိျု့တတျသူတှေ၊ အခြိနျပွညျ့ ကှနျပွူတာရှထေို့ငျပွီး Anime ကွညျ့ (သို့) Manga ဖတျနတေတျသူတှေ၊ ကိုယျသဘောကတြဲ့ Anime Character နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေို ဝယျယူစုဆောငျးတတျသူတှနေဲ့ Cosplay တှကေို သဘောကတြတျသူတှေ လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီ့ထကျပိုရှငျးအောငျ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ Anime မှ Anime ဖွဈကွတဲ့သူတှပေဲ ဆိုကွပါစို့ရဲ့… (တကယျတော့ Otaku ဆိုတဲ့ အသုံးက Negative ဘကျ နညျးနညျးရောကျပါတယျနျော… နောကျမြားမှ Otaku အကွောငျး အကယျြတဝငျ့ပွောကွတာပေါ့.. လောလောဆယျတော့ အကျဒျမငျပွောခငျြတဲ့အကွောငျးလေး အရငျသှားကွရအောငျ..)
ဒီလို Otaku တှဟော ပုံမှနျ Anime ကွညျ့လမေ့ရှိသူတှနေဲ့ ရငျးနှီးခဲပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Otaku တှအေကွောငျး Otaku တှပေဲ သိလို့ပေါ့… ဒါဆို Otaku အခငျြးခငျြးသာ နားလညျနိုငျမယျ့ ကိစ်စတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ…
၁။ ဂပြနျစာ သငျရခွငျး ရညျရှယျခကျြ
သူမြားတကာတှကေ JLPT တှေ ဖွမေယျ၊ ဂပြနျမှာ ကြောငျးတကျမယျ၊ ဂပြနျမှာ အလုပျလုပျမယျလို့ ရှိကွပမေဲ့ Otaku တှေ ဂပြနျစာ သငျရခွငျးရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြဟာ Sub (စာတနျးထိုး) ကို မစောငျ့ဘဲ Anime တှေ ကွိုကွညျ့ခငျြလို့ပါ။ ဒီရညျရှယျခကျြရဲ့ နောကျမှာမှ ဂပြနျသှားဖို့ဆိုတာ လိုကျလာတာပါ။ သှားခငျြတဲ့ ရညျရှယျခကျြကိုလညျး မေး.. ၉၀% လောကျက Anime နဲ့ ဆကျစပျနတောခညျြးပဲ 😀
၂။ ကွညျ့လကျစ Anime ပွီးသှားတဲ့အခါ
ဘဝကွီး အဓိပ်ပာယျမရှိတော့သလိုလို့ ပွောလိုကျရငျ လှနျရာမြား ကသြှားမလား 😀 ဒါပမေဲ့ တကယျပါပဲ.. ကိုယျကွညျ့လကျစ Anime တဈခု မပွီးခငျမှာ ဒီ Anime ကို ဇာတျမသိမျးသှားစခေငျြသလို ပွီးသှားတဲ့အခါမှာလညျး Season အသဈကို မြှျောရပါတယျ။ Season အသဈ မထှကျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ရှငျသနျရခွငျး အဓိပ်ပာယျပြောကျဆုံးသှားသလိုပါပဲ… T.T ဘယျသူနဲ့မှလညျး မပွောခငျြ၊ မဆိုခငျြ၊ စိတျထဲ ဝမျးနညျးပွီး ရညျးစားနဲ့ ပွတျလို့ အသညျးကှဲတာထကျတောငျ ပိုဆိုးပါသေးတယျ။ (အကျဒျမငျဆို Bleach နဲ့ ကမ်ဘာပကျြပွီးပွီ 😀 )
Related Article >>> ယောငျးတို့ရဲ့ ဘဝအမောတှကေို ပွလြေော့စမေယျ့ Anime ဇာတျလမျးတှဲ (၂)ခု
၃။ Anime တှကေို နားကွပျနဲ့ မဟုတျဘဲ ကွညျ့မိတဲ့အခါ
ကွုံဖူးလား? ကိုယျကတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ရိုးရိုးသားသားလေး Anime တှကေို ဖှငျ့ကွညျ့တာ… ဘေးက သူငယျခငျြးတှကေ ၁၈ ယောကျအထကျ စုကွညျ့ရတဲ့ ဇာတျကားတှေ ကွညျ့နတေယျလို့ ထငျသှားတဲ့ အဖွဈမြိုး -_- အကျဒျမငျတော့ ခဏခဏ ခံရပါတယျရှနျ :/
၄။ ဇာတျကားပျေါလိုကျပွီး Mood ပွောငျးတာ
Kuroko No Basket ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ ဘတျစကကျဘော ဆော့ခငျြတာမြိုး၊ Haikyuu ကွညျ့ရငျ ဘျောလီဘော ဆော့ခငျြတာမြိုး၊ Bleach ကွညျ့ရငျး Hollow တှနေဲ့ တိုကျခငျြတာမြိုး၊ Free ကွညျ့ရငျ ရကေူးခငျြတာမြိုး၊ Tokyo Ghoul ကွညျ့ပွီး လူတှကေို မုနျးတာမြိုး၊ Sword Art Online ကွညျ့ပွီး ဂိမျးဆော့ခငျြတာမြိုး.. ကိုယျတို့ Otaku တှသေညျ ကွညျ့တဲ့ Anime ပျေါလိုကျပွီး Mood ပွောငျးတတျသော ပါပဲ 😀
၅။ Anime တှကေို Dubbed နဲ့ ကွညျ့လိုကျရတဲ့အခါ
အကျဒျမငျ့အတှကျ အဆိုးဆုံးသော ဖီလငျက ဒါပါ… ကိုယျမတရားကွိုကျတဲ့ Anime တှကေို ကွညျ့မယျဆိုပွီး ဖှငျ့လိုကျတဲ့အခြိနျ အင်ျဂလိပျ အသံထှကျနတောမြိုးဆို ဒေါသက တလိမျ့လိမျ့ ထှကျလာရော.. :’D မခံစားနိုငျပါဘူးရှနျ… ဘယျလိုပဲ 2D ပါလို့ပွောပွော လကျကို မခံနိုငျတာပါနျော.. (ဒါတော့ တရုတျကားတှေ၊ ထိုငျးကားတှကေို မွနျမာ Dub နဲ့ မခံစားတတျတဲ့သူတှပေါ နားလညျနိုငျမယျ ထငျပါရဲ့ :’D )
Related Article >>> ၅၂၈ မတ်ေတာကိုဖျောကြူးထားတဲ့ Anime ရုပျရှငျကား(၃)ကား
၆။ ဒီအရှယျထိ ကာတှနျးကားတှေ ကွညျ့နတေုနျးလားလို့ အပွောခံလိုကျရတဲ့အခါ
Anime ဆိုတာဟာ ကလေးတှအေတှကျ ရညျရှယျထားတာ မဟုတျကွောငျး၊ လူငယျနဲ့ လူကွီးတှအေတှကျ ရညျရှယျရငျး ကလေးတှပေါ ကွညျ့လို့ရအောငျ ထုတျထားတာ ဖွဈကွောငျး၊ ကာတှနျးလို့လညျး ခွုံပွောလို့ မရတဲ့အကွောငျး (တကယျတော့ ဂပြနျကာတှနျးဆိုရငျလညျး ယဘေုယအြားဖွငျ့ မှနျတော့ မှနျရှာပါတယျ… မကွိုကျပမေဲ့လို့လညျး လကျခံပေးရတဲ့ အပိုငျးတှေ ရှိတာကိုး :3 )၊ ကှာခွားခကျြတှကေို သခြော မွငျစခေငျြကွောငျး တနံတလြား ရှငျးပွလိုကျရမှ.. 😀 ပွောရတာလညျး မောနပေါပွီရှငျ… ဒီလောကျရှငျးပွလညျး နောကျဆုံးကြ.. အေးပါ.. အေးပါ.. နငျပဲ နငျ့ကာတှနျးတှနေဲ့ နပေါ ဆိုပွီး ဖွဈသှားတဲ့အခါမှာ….
၇။ Otaku နောကျတဈယောကျနဲ့ တှလေို့ကျရတဲ့အခါ
အမှတျမထငျ စကားစပျမိလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ သူလညျး Anime ကွညျ့တယျဆိုပွီး သိလိုကျရတဲ့အခြိနျဟာ တနျဖိုးဖွတျမရတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးတှပေါပဲရှငျ… ပွီးရငျတော့ ဘယျ Anime က ဘယျလို ဘယျညာ ဘယျခမျြးသာဆိုပွီး ရပေကျမဝငျအောငျ စကားတှေ မြားကွတော့တာပါပဲ… သူ့ဆီက ရှိတာ ကိုယျ့ကို ပေး၊ ကိုယျ့ရှိတာ သူ့ကိုပေးပွီး အဲ့ဒီကနပေဲ အရငျးနှီးဆုံးတှေ ဖွဈကုနျတော့တာပါပဲ။
ကဲ.. ဒီထဲက ဘယျနှဈခကျြနဲ့ ကွုံဖူးကွလဲ ယောငျးတို့? ယောငျးတို့ရဲ့ အမှတျတရလေးတှလေညျး ပွောပွသှားကွဦးနျော…
Tags: anime, Feelings, Fun, Manga, Otaku, problems